Sekuseduze ziwushaye kuSelbiyonce woKhozi FM | isiZulu
Lithathe osemsamo lamubeka emnyango ezinguqukweni zoKhozi FM
Imibiko ithi uSgqemeza usezosakaza yedwa kulandela izikhalazo zomphakathi
Izinguquko zoKhozi FM: uZama Ngcobo noS'gqemeza bazohlukaniswa
Durban - Ziyawushaya kwisilomo somsakazi woKhozi FM uSelby "Selbyonce" Mkhize oshayela uhlelo lwantambama noTshatha Ngobe olubizwa ngeWoza Nabangani Bakho phakathi nezinsuku.
USelby ophumele obala ngokuphila impilo yobutabane ungomunye wabasakazi abangaconsi phansi kulo msakazo kanti usephenduke intandokazi ngokuphatha imicimbi eyahlukene yobumnandi.
ILANGA LangeSonto lihabule izindaba zokuthi lo msakazi useqalile ukwenza amalungiselelo omshado wakhe njengoba kulindeleke ukuba ziwushaye ngoZibandlel.
Umthombo osondelene noSelby upotshoze ezithi emasontweni ambalwa adlule kube nomhlangano wemindeni lapho kudingidwe khona udaba lokushada kukaSelby nesithandwa sakhe seminyaka.
Uqhuba ngokuthi uSelby uyafisa ukuphumela obala ngothando lwakhe kodwa isoka lakhe yilona elingafuni ukuvela njengoba lamdonsa ngendlebe ukuba angalidaluli nakobhululu bakhe.
"Emasontweni ambalwa adlule umndeni wesoka ufikile kubo kwaSelby eMaoti, kwaba nezingxoxo zomshado. Alizange likhishwe ilobolo kodwa kube nezingxoxo kwabe sekuvunyelwana kanjalo," kusho umthombo osondelene noSelby.
OLUNYE UDABA:Ukhozi FM "lulaxaze" umcimbi kaMroza
Unanele ngokuthi lo msakazi uyafa yinjabulo kulezi zinsuku njengoba engakufihli ukuthi maduze uzoba ngumuntu womuntu ngokusemthethweni. Leli phephandaba liphinde lathola ngomunye umsakazi ukuthi sekunesikhathi uSelby ekhuluma ngokushada kodwa engamnaki ngoba ungumuntu ozithandelayo ukukhuluma.
"Uhlezi esitshela ukuthi uzoshada maduze kodwa sivamise ukungamkholwa ngoba asikaze silibone nesoka lakhe kodwa uhlale esiqhoshela ngalo mihla namalanga," kusho lo msakazi ocele ukungadalulwa igama.
ILANGA LangeSonto lithole ukuthi isoka likaSelby lisebenza njengesikhulu sezimali kwesinye sezibhedlela zaseThekwini.
Ethintwa uSelby ukuqinisekisile ukuthi umshado ususemome.
"Kunjalo ngempela kodwa ngeke kube wumshado omkhulu, kuzoba owomndeni nalabo esisondelene nabo kuphela," esho.
Akafunanga ukudalula imininingwane kodwa ukuqinisekisile ukuthi uzoba ngoZibandlela. Mayelana nezingxoxo zamalobolo okuthiwa zenzeke emasontweni ambalwa adlule akafunanga ukuphawula ngazo. "Engingakusho wukuthi imindeni isike yahlangana, okunye ngeke ngande ngakho ngoba kuyimfihlo," esho.
Kuzokhumbuleka ukuthi kuvela lezi zindaba nje nozakwabo kaSelby uSthandwa Nzuza ngeledlule ubethenjiswa umshado yisithandwa sakhe uMfu Philani S Gama.